Ho An’ireo Mpampiasa Telegrama, Manamafy Ny Fahefan’ny Fanjakana Mitsikilo Ny Fitakiana Amin’izy ireo ny Fisoratana Anarana Ao Iràna · Global Voices teny Malagasy
Ho An'ireo Mpampiasa Telegrama, Manamafy Ny Fahefan'ny Fanjakana Mitsikilo Ny Fitakiana Amin'izy ireo ny Fisoratana Anarana Ao Iràna
Voadika ny 14 Janoary 2017 11:21 GMT
Mampiroborobo ny fahafahan'ny sampan-draharaha mitsikilo ny fihetsik'ireo mpampiasa aterineto ny fitakiana amin'ireo tomponà fantsona Telegram mba hisratra anarana ao amina tranonkalam-panjakana. Sary avy amin'ny ICHRI ary nampiasaina miaraka amin'ny fahazoan-dalana
Dika iray an'ity lahatsoratra ity no nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ary averina zaraina eto ao anatin'ny fiarahamiasa amin'ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona ao Iràna.
Tamin'ny andrana farany nataon'ny sampan-draharaha Iraniana mikasika ny filaminana sy ny fitsikilovana mba hanivana ary hifehy ny Aterineto ao Iràna, ireo mpiandraikitra ny fantsona Iraniana malaza amin'ny fampiasana fandefasana hafatra Telegram dia takiana ankehitriny mba hisoratra anarana any amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika, na hiatrika fanenjehana.
Telegram dia fampiasa fandefasana hafatra eo noho eo izay mamela ireo mpampiasa azy hamorona fantsona votoaty sy vondrona ao anatin'ny aterineto.
”Ireo fantsona malaza ireo dia azo fantarina avy amina andiana algoritma ary [ny mpitantana azy ireo] dia azo fantarina sy toriana, noho izany tsy mila fiarahamiasa avy amin'i Telegram izahay,” hoy i Mehrdad Sijani, ny mpitarika ny antokon-draharaha misahana ny tontolon'ny aterineto ao amin'ny Fikambanan'ny Mpivarotra Solosaina ao Tehran, tamin'ny 5 Janoary 2017. Nanambara tamin'ny volana Jolay 2015 ny fanjakana Iraniana fa tsy hanivana ny Telegram ry zareo na eo aza ny fisian'ireo votoaty tsy mendrika ao amin'izany sehatra izany, fa kosa hiaraka hiasa amin'ny Telegram mba hampanara-dalàna izany. Nandà mafy izany fiampangàna izany ny mpanorina sy Tale Jeneralin'ny orinasa. Nanomboka teo, niezaka lalandava ny handresy lahatra ilay orinasa mitoetra any Berlin mba hamindra ny lohamiliny ao amin'ny tany Iraniana ny fanjakana Iraniana mba ahafahan'ny sampan-draharaham-panjakana miditra mivantana ao amin'ny angony, fa nandà hatrany ny karazana endrika fiaraha-miasa toy izany ny Telegram.
Amin'ny famokarana sarintanin'ireo mpampiasa sy ny fisoratany anarana amin'ny antsipirihany, noforonina mba hanampy ireo sampan-draharaham-panjakana izany fisoratana anarana amin'ny aterineto izany, ahitana ny Polisy amin'ny Aterineto (FATA), amin'ny fanarahana maso ny fihetsiky ny tompon'ny fantsona Telegram sy ny mpanaraka azy , manamafy haingana araka izany ny fahafahany manivana ny vaovao sy mitsara ny olona noho ny zavatra ataony an-tserasera.
Tany am-piandohan'ny Desambra 2016, ny voalohany mpanao ny politikan'ny aterineto ao amin'ny fanjakana, ny Filankevitra Fara Tampon'ny Habaka, dia nanambara fa ireo fantsona Telegram izay manana mpanaraka mihoatra ny 5.000 dia tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana mialoha ny 25 Febroary 2017. Toy ny tamin'ny 5 Janoary, mpitantana fantsona sasany miisa 700 no nitady fahazoan-dalana, araka lazain'i Reza Taghipour, mpikambana ao amin'ilay filankevitra.
Miaraka amina mpampiasa manakaiky ny 20 tapitrisa, Telegram no fampiasa fandefasana hafatra malaza indrindra ao Iràna ary mampiantrano fantsona miisa 170.000 tantanan'ny Iraniana. Maherin'ny 11.000 amin'ireo fantsona ireo no manana mpikambana 5.000 farafahakeliny, araka ny manampahaizana mikasika ny tontolon'ny aterineto, Alireza Talebpour.
Ho amin'ny fangatahana fahazoandalana, tsy maintsy manome ny anaran'ny fantsony ireo tompon'ny fantsona, anarana feno ara-dalàna, adiresim-ponenana ary laharana nasionaly famantarana ao amin'ny tranonkala, www.samandehi.ir. Tsy maintsy mampiditra ny ”bot” ”iransamandehibot” ho toy ny mpiara-mitantana ”vonjimaika” ihany koa ireo mpampiasa, raha ny fahitàna azy toa mandra-panamarin'ny Ministera ny fantsona.
Anatin'ireo asany hafa, afaka manampy ny fahafahana manara-maso malalaka ireo ‘bots’ , amin'ny alalan'ny fitadiavana angona haingana sy mahomby momba ireo mpampiasa manokana, ary amin'ny fanarahana maso ny fihetsiny amin'ny aterineto ao anatina fomba mandeha ho azy.
Tamin'ny Aogositra 2016, nahazo ny laharana findaina Iraniana mpampiasa Telegram mihoatra ny 15 tapitrisa ireo Iraniana mpijirika, tamin'ny fijirihana kaonty mihoatra ny ampolony tao amin'ilay fampiasa izay nofaritan’ Reuters ho toy ny ”fitriarana lehibe indrindra indrindra fantatra hatreto tamin'ilay rafitra fanafenan-tsoratra an-tserasera.” Nanamarina ny fisian'ilay triatra tamin'ny fiarovana ny Telegram, fa nilaza kosa fa izay angona afaka jeren'ny be sy ny maro ihany no voaangona ary tsy nidirana mivantana ireo kaonty, nampiany fa efa nanitsy izany olana izany izy: ”Tsy azo atao intsony ny fanarahana maso faobe toy izany nanomboka tamin'ny nampidiranay famerana sasantsasany tao amin'ny API-nay (interface-ny fandaharana fampiharana) tamin'ity taona ity.”
Tiorkia 10 ora izay